Maxaad kala socotaa magacyada 10-ka Mas ee Dunida ugu halista badan iyo dalalka ay ku nool yihiin? (Daawo Muuqaal ahaan+Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Qaar ka mid ah Masaska ugu Sunta kulul Dunida Qofka marka ay qaniinaan nolol laguma soo gaaro halka qaar kale Suntooda ay sababto inuu Qofka si deg deg ah isku badalo weliba uu korkiisa bararo ilaa uu Saacado gudahood ku geeriyoodo.
Sunta Masaskaan qaarkood Daawo ma lahan wuxuuna Qofka ay qaniinaan uu Noolaan karaa ugu badnaan ilaa 6-saacadood sida uu sheegay Dhaqtar u dhashay dalka Mareeykanka oo Cilmi baaris ku sameeyay heerka ay gaarsiisan tahay Sunta Masaskaan qatarta ah.
Masaskaan oo Magacyo kala duwan xambaarsan waxaa ugu sahlan oo si caan ah loo yaqaan Maska Kobraha oo ku nool dalka India balse gudaha dalkaas looga yaqaan (Naja naja). Dalalka kale ee la sheegay inay Masaskaan halista ah ku nool yihiin waxaanu ka xusi karnaa Indonesia, Philipiin, Australia qaar ka tirsan Wadamada Africa iyo dalka Mareeykanka.